Xoghayaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta Mudane cabdi Qani Saciid Carab oo ka war bixiyay qaabka uu bari ku bilaabanayo tartanka gobalada Puntland.
Wednesday November 19, 2008 - 13:21:21
Xoghayaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cabgat Mudane cabdi Qani Saciid carab oo goor dhoweyto qadka teleefonka ugu warramay waaxda warfaafinta ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta ayaa shaaca ka qaaday in barri oo khamiis ah gellinka hore magaalada Garowe ay ka dhici doonto munaasabad…
Xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed oo dayac tir ku sameeyay garoonka kubada cagta Mire Awaare ee magaalada garowe.
Wednesday November 19, 2008 - 11:55:38
Masuuliyiinta xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta ayaa maanta shaaca ka qaaday in uu soo dhamaaday dayactir lagu sameynayay garoonka kubada cagta Mire Awaare ee magaalada Garowe kaas oo maalmihii lasoo dhaafay qeybo ka mida dayactir uu xiriirku ku waday.
Imisa tababare ayaa u sharaxan jagada kooxda West Ham?
Thursday September 04, 2008 - 14:43:28
Ku dhawaad 5 tababare oo heer sare ah ayaa u sharaxan jada tabarenimo ee kooxda West Ham, kaddib markii uu is carsilay tababarihii hore ee kooxda Alan Curbishley.
Kooxda Milan oo diyaar u ah in ay KAKA ka iibiso Chelsea.!!
Monday September 01, 2008 - 15:40:32
Kooxda K/cagta ee AC Milan ee wadanka Talyaaniga ayaa dooneysa in ay KAKA ka iibiso kooxda Chelsea ee wadanka INgitiiska sida laga soo xigtay ilo muhiim ah oo ku sugan wadanka Talyaaniga...
Fabregas oo ku taliyay in Kooxda Arsenal lagu soo biiriyo Alonso.!!
Monday September 01, 2008 - 15:33:37
Ciyaaryahanka Khadka dhexe ee kooxda Arsenal iyo xulka qaranka wadanka Spain Cesc Fabregas ayaa tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger u sheegay in...
Kooxda Arsenal oo si wada jir ah ula soo saxiixaneysa Barry iyo Silvestre.!!
Monday September 01, 2008 - 15:29:26
Kooxda K/cagta ee Arsenal ayaa ku jirta qorshihii ugu dambeeyay ee la soo saxiixashada ciyaartooy muhiim ah...
Silvestre oo heshiis laba sanadood ah u saxiixay kooxda Arsenal.!!
Monday September 01, 2008 - 15:25:24
Difaaca caalamiga ah ee xulka qaranka wadanka France iyo kooxda Manchester United Mikael Silvestre ayaa si rasmi ah ugu soo biiray kooxda Arsenal ee wadanka Ingiriiska..
Robinho oo ku sii jeeda kooxda Chelsea...
Monday September 01, 2008 - 15:20:54
kaddib fasax uu ka helay Real Madrid..!
Harry Redknapp "Shaqada ay qabtaan Ferguson iyo Scolari waxaa qaban kara Xaaskeyga "!
Monday September 01, 2008 - 15:17:28
Tababaraha kooxda K/cagta ee Portsmouth ee wadanka INgiriiska Harry Redknapp ayaa dacaayada ku furay tababarayaasha kooxaha Manchester United iyo Chelsea Philp Scolari iyo Sir Alex Ferguson..
Monday September 01, 2008 - 14:57:56
Xulka wadanka Spain ayaa goor dhaweyd u soo baxay Final-ka koobka Euro-2008, kaddib markii uu 3-0 ku suul-daaray wadanka Russia,
53-da xiriir ee UEFA oo isku raacay in laga dhigo 24 xul koobka Q/Q/Yurub.
Monday September 01, 2008 - 14:52:05
Wadamada xiriirka UEFA ayaa si rasmi ah u aqbalay in xulalka ka qeyb qaadanaya ciyaaraha qaramada qaarada Yurub la badiyo, isla markaana laga dhigo, 24 wadan,
Monday September 01, 2008 - 14:48:32
Guddiga xiriirka K.cagta ee qaaradda Yurub Uefa u qaabisan arrimaha farsamada ayaa si rasmi ugu dhawaqay in ciyaaryahankii ugu fiicnaa tartankii Euro 2008 ee ku soo idlaaday wadanka Austria..
Ballack iyo D.Villa oo kala sheegtay hanashada koobka Euro 2008.!!
Monday September 01, 2008 - 14:46:11
Nasiib darro xoog leh ayaa soo wajahday laacibka KHadka dhexe ee Kabtanka xulka qaranka wadanka Germany Michael Ballack markii uu soo gaaray dhaawac sababay inuusan ka qeyb qaadan ciyaarta final koobka Euro 2008.
Lehmann "Henry ayaa ka fiican Torres, laakiin haddii uu dadaalo waa gaari karaa"!
Monday September 01, 2008 - 14:36:03
Goolhayaha wadanka Germany Jens Lehmann ayaa sheegay in weeraryahanka xulka qaranka wadanka Spain iyo kooxda Liverpool Fernando Torres aanu weli gaarin heerka uu Thierry Henry ka gaaray K/cagta.
Taageereyaasha kooxa Galaxy oo u codeeyay in D.Beckham uu noqdo Tababare.
Monday September 01, 2008 - 14:23:37
kaddib markii todobaadkii hore uu xilka tababarenimo ee kooxda LA Galaxy ee wadanka Mareykanka uu ka degay tababarihii hore ee kooxda Ruud Gullit ayaa taageerayaasha kooxda La Galaxy waxay si aan caadi aheyn is kugu raaceen in...
Xulalka Argentina iyo Nigeria oo iskugu soo haray final-ka koobka Olombikada.!!
Monday September 01, 2008 - 14:17:11
Wadanka Argentina oo difaacanaya koobka K/cagta ee Olombikada adduunka ayaa galabta ku soo tuntay dhigiisa wadanka Brazil...
Xulalka Brazil, Argentina iyo Italy oo u soo baxay quarter-final-ka Olombikada!!
Monday September 01, 2008 - 14:13:06
Laacibka khadka dhexe ee weerarka ee xulka qaranka wadanka Brazil Ronaldinho ayaa dib u soo celiyay rajada xulkiisa Brazil ee ciyaaraha olombikada...
Ronaldinho" waxaa lajoogaa xiligii aan ka aarsan lahaa Camaroon"
Monday September 01, 2008 - 14:09:33
Xiddiga caanka ah ee wadanka Brazil iyo kooxda AC Milan Ronaldinho oo ku sugan wadanka China ayaa sheegay in ay ka aarsanayaan wadanka Cameroon.
Pele (Mesi waa Ciyaarihanka ugu wanaagsan Caalmka)
Monday September 01, 2008 - 13:56:42
Khabiirkii hore ee K/cagta, laacibkii wadanka Brazil Pelel oo ku sugan wadanka China ee ay ka socdaan ciyaaraha Olombikada caalamka ayaa sheegay in laacibka da'da yar ee wadanka Argentina iyo kooxda Barcelona Lionel Messi uu yahay ciyaaryahanka caalamka ugu fiican "best player in the world",